Firaisana tsikombakomba :: Mpivady voarohirohy niaraka tamin’ny jiolahy • AoRaha
Olona enina no voasambotra sy voarohirohy tamin’ny fanafihana fivarotana mpivarotra entana ambongadiny, teny Fenoarivo, tamin’ny alatsinainy 25 mey lasa teo. Misy mpivady voatondro ho nanoro an’ireo jiolahy ny toerana hotafihana. Tratra teny amin’ireto voasambotra ireto ny ampahany tamin’ny vola 13 tapitrisa ariary voaroba.
Herinandro taty aoriana, nahitam-bokany ny fikarohana nataon’ny zandary ny naman’ireo lehilahy telo voasambotra teny Ampanefy Atsimondrano, ora vitsy taorian’ny nisehoan’ny fanafihana. Tratra ny vehivavy sy lehilahy roa hafa. Mbola misy olona iray karohina.
« Tafaverina ny vola dimy tapitrisa ariary mahery. Nahatrarana rongony sy basy poleta ihany koa teny amin’ireo voasambotra. Mipetraka tsy lavitra ny fivarotana voatafika izy mivady izay niray tsikombakomba tamin’ny jiolahy », hoy ny zandary. Tsiahivina fa noho ny fiaraha-miasa teo amin’ny fokonolona sy ny zandary ary ny polisy no nahatrarana ny lehilahy telo voalohany nandositra, teny Ampanefy Atsimondrano, rehefa avy nandroba teny Fenoarivo. Nisy noraisim-potsiny tao antranon’olona niafenany tamin’izy telo lahy.
Ahiahy firaisana tsikombakomba :: Vadina mpiandry fonja saika matin’ny fokonolona